अल्ट्रासोनिक्सको साथ दालचीनीको टर्बो निकासी - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
परम्परागत दालचीनी निकासी समय खपत र अपेक्षाकृत अक्षम छ। अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण एक सरल, तर अत्यधिक कुशल प्रक्रिया तीव्र गर्ने प्रविधि हो जसले निकाल्ने समयलाई केही घण्टामा कम गर्दछ र साथसाथै दालचिनी आवश्यक तेल उत्पादन बढाउँदछ।
अल्ट्रासोनिक्सको साथ सुधारिएको दालचिनी एक्सट्रैक्शन
दालचीनी आवश्यक तेलको परम्परागत निकासी दालचीनीको बोक्रा र पातहरूको भाप डिस्टिलेसन द्वारा प्राप्त गरिन्छ। परम्परागत भाप आसवन धेरै ढिलो र समय खपत गर्ने छ। दालचीनीको तेलको अधिक लक्षित उपज, लामो स्टीम डिस्टिलेसन, जसको मतलब दालचीनीको पातको भट्टी आसवन १२ घण्टा लिन सक्दछ, जबकि दालचीनीको बोक्राको भाप डिस्टिलेसनले २ 24 घण्टा भन्दा बढी लिन सक्दछ। अल्ट्रासोनिक निकासीले दालचीनीको बोक्राको सेल संरचना तोड्छ र छोड्छ ताकि दालचीनीको तेल द्रुत र पूर्ण रूपमा जारी हुन्छ। अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्शनले भाप डिस्टिलसनलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँदछ, प्रसंस्करण समयलाई एक पूरा दिनदेखि घण्टा घण्टाको बनाउँदछ जबकि दालचीनी आवश्यक तेलको उत्पादन बढाउँदै।
अल्ट्रासोनिक निकासीले सिन्नमेलडीहाइड, लिनालुल, यूजेनोल, र सिन्नमिक एसिड सहितको सुगन्धित दालचीनी यौगिकाहरूको पूर्ण स्पेक्ट्रम जारी गर्दछ। उच्च-गुणवत्ताको आवश्यक तेल मिश्रणहरूको पूर्ण स्पेक्ट्रम निकाल्ने अल्ट्रासोनिक तानिएको दालचिनी तेलको उच्च गुणस्तरको कारण हो। विशेष गरी cinnamaldehyde, मुख्य जैविक यौगिकले दालचिनी यसको हस्ताक्षर स्वाद र गन्ध दिन्छ। Sonication एक गैर-थर्मल उपचार को रूप मा, आवश्यक तेल यौगिकहरु थर्मल गिरावटबाट रोकिन्छ। त्यसकारण, अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शनले उच्च गुणवत्ताको मापदण्ड पूरा गर्ने गन्ध-गहन आवश्यक तेल उत्पादन गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक निकासी दालचीनी बोक्रा र पातहरूमा लागू गर्न सकिन्छ। दालचीनी पातको तेलको छालको तेलको तुलनामा कडा गन्ध हुन्छ। दालचीनी पातमा युजोनल उच्च मात्रा हुन्छ।
अल्ट्रासोनिक दालचीनी निकासी को फाइदा
अल्ट्रासोनिक अर्कर UIP4000hdT लगातार दालचीनी निकासी को लागी
किन अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासनले स्टीम डिस्टिलेसन भन्दा बढि गर्छ
दालचीनीबाट स्टीम डिस्टिलेसनको माध्यमबाट आवश्यक तेलहरू उत्पादन गर्न, आवश्यक तेलहरू पहिले बिरुवा म्याट्रिक्सबाट (अर्थात् दालचीनीको पात वा बार्कमा प्लान्ट कोषहरू) बाहिर निकाल्नु पर्छ। स्टीम डिस्टिलेसनमा, दालचिनीको बोट सामग्री केटलहरूमा २ 24 घण्टासम्म उमालिन्छ। गर्मी एक्लो सेल कोषहरू तोड्न र आलिंगन आवश्यक तेल छुट दिन अपेक्षाकृत अक्षम छ। सामान्यतया, उमाल्नेले एन्क्र्याप गरिएको आवश्यक तेलहरू पूर्ण रूपमा रिलिज गर्दैन र ठूलो मात्रामा अवशिष्ट तेलहरू खेर फालिन्छन्, किनकि उनीहरूलाई निकालेको थिएन। गर्मी निकासी प्रक्रिया पछि, स्टीम आसवन हुनेछ। तसर्थ, दुई अमिश्रित तरल पदार्थको मिश्रण (अर्थात् आवश्यक तेल र पानी) उमालेको छ। मिश्रण उबल्न सुरु हुन्छ जब उनीहरूको संयुक्त बाफ प्रेशर 6060० मिमी Hg बराबर हुन्छ। पानी र अत्यावश्यक तेलको मिश्रणको उमाल्ने पोइन्ट यसैले कुनै पनि कम्पोनेन्टको पृथक विन्दु भन्दा कम हुनेछ। परम्परागत हाइड्रोडिस्टेलेसनको प्रमुख कमजोरीहरू छन्: लामो उमाल्ने र स्टीमिंग प्रक्रिया धेरै समय र ऊर्जा खपत गर्ने हुन्छ।
अल्ट्रासोनिक निकासी ध्वनिक cavitation द्वारा काम गर्दछ। ध्वनिक काभेटेशन देखा पर्दछ, जब पावर अल्ट्रासाउंड तरंगहरू तरलमा जोडी हुन्छन् (जस्तै निलम्बन वा वनस्पतिमा वनस्पति सामग्री समावेश हुन्छ)। अल्ट्रासोनिक छालहरूले तरलको माध्यमबाट यात्रा गर्दछ जसले उच्च दाब / कम दबावको चक्रलाई बदल्छ। कम दबाव चक्रको बखत, मिनेट भ्याकुम बुलबुले (तथाकथित cavitation बुलबुले) सिर्जना गरिन्छ, जुन धेरै दबाव चक्रहरूमा बढ्छ। एक निश्चित आकारमा, जब बुलबुले अधिक ऊर्जा लिन सक्दैनन्, तिनीहरू उच्च-चक्रको चक्रको क्रममा हिंस्रक रूपमा घुम्छन्। बबल प्रकोप तीव्र cavitational शक्तिहरू द्वारा दर्शाईन्छ, माइक्रो-टर्बुलेन्स र तरल स्ट्रिमहरू सहित १००m / s को वेगको वेगको साथ। यी cavitational कतर प्रभावहरू Sonomechanical प्रभाव पनि भनिन्छ। बायोएक्टिव अणुहरूको अल्ट्रासोनिक निकासी मुख्यतया सोनोमेकेनिकल प्रभावहरूको कारणले हुन्छ: आन्दोलन र टर्बुलेन्सले सेलहरू अवरुद्ध गर्दछ र सामूहिक ट्रान्सफरलाई बढावा दिन्छ। यसको अर्थ बायोएक्टिव अणुहरू जस्तै आवश्यक तेल, पोलीफेनल्स, टर्पेनेस, र क्यानाबिनोइडहरू विरूवा कोष मैट्रिक्सबाट विलायकमा निकालिन्छन्।
परम्परागत उमाल्ने र स्टीम डिस्टिलेसन विधिमा अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शनको फाइदा तुलनात्मक रूपमा अत्यावश्यक तेल र अन्य जैविक यौगिकको तुलनात्मक रूपमा उच्च निकासी हो जुन एक महत्त्वपूर्ण छोटो समयमा हुन्छ। उच्च निकासी उत्पादनले कच्चा मालको खेर फालिनबाट जोगाउँदछ र निकासीलाई अधिक आकर्षक बनाउँछ। अल्ट्रासोनिक निकासी द्वारा प्राप्त समय र ऊर्जा बचत पर्याप्त छन्। गैर-थर्मल विधिको रूपमा, अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यामेसनले ताप-संवेदनशील यौगिकहरूलाई गर्मी-प्रेरित गिरावटबाट रोक्दछ।
हल्का तापक्रम र छोटो प्रसंस्करण समय अल्ट्रासोनिक निकासीको प्रमुख फाइदाहरू हुन् किनकि प्राकृतिक अर्काको तापीय अपघटन रोकिन्छ। यो अल्ट्रासोनिक निकासी अत्यधिक कुशल बनाउँछ र त्यसैले, Sonication राम्रो गुणवत्ता को आवश्यक तेल दिन्छ।
अल्ट्रासोनिक दालचीनी निकासी को केस स्टडी
अनुसन्धान र उद्योगले पहिले नै दालचीनी पात र बार्क लगायत धेरै बोटानिकलहरूबाट उच्च-गुणवत्ताका आवश्यक तेलहरूको उत्पादनको लागि अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासन अपनाएको छ।
दालचीनी को अल्ट्रासोनिक hydrodistillation
चेन एट अल। (२०२०) लाई अल्ट्रासोनिक रूपमा प्रमोट गरिएको हाइड्रोडिस्टीलेसनको अनुसन्धान गरियो र निष्कर्ष निकायो कि सोनिकेशनले डिस्टिलेसन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार ल्यायो। अल्ट्रासोनिक स्टीम डिस्टिलेसनले दालचीनीको तेलको अत्यधिक उत्पादन प्रदान गर्‍यो तर अत्यन्तै कम निकाल्ने समय भित्र। GC-MS विश्लेषण प्रयोग गरेर, तिनीहरूले अल्ट्रासोनिक सहायताले हाइड्रोडिस्टीलेशनले पारम्परिक हाइड्रोडाइस्टेलेसनको तुलनामा मुख्य कम्पाउन्ड ट्रान्स-सिन्नमालडिहाइडको उच्च सामग्रीको साथ अधिक मूल्यवान अत्यावश्यक तेल प्रदान गरेको देखायो। स्क्यान इलेक्ट्रोन माइक्रोग्राफ (SEM) दालचीनी तेल निकासी को लागी Sonication को दक्षता पुष्टि। थप रूपमा, विद्युतीय खपत र CO2 उत्सर्जनको विश्लेषणले देखाउँदछ कि अल्ट्रासोनिक सहायताले हाइड्रोडिस्टेलेसन प्रक्रिया अधिक आर्थिक र वातावरणमैत्री दृष्टिकोण हो। तसर्थ, चेन एट अल। सारांश दिनुहोस् कि अल्ट्रासोनिक सहायताले हाइड्रोडिस्टीलेसन दालचीनी आवश्यक तेल निकासीको लागि एक कुशल र हरियो प्रविधि हो, जसले दालचिनी तेलहरूको मात्रा र गुणस्तर सुधार गर्न सक्दछ।
अल्ट्रासोनिक दालचिनी एक्सट्र्यासन डीप युटेक्टिक सॉल्भेन्ट्स प्रयोग गरेर
गहिरो eutectic सॉल्भेन्ट्स को प्रयोग गरेर अल्ट्रासोनिक निकासी ट्रान्स-सिन्नमेल्डेहाइड र दालचीनी बार्कबाट कुमरिनको उच्च उत्पादन निकाल्नको लागि एक उच्च प्रविधि हो।
इष्टतम अवस्थाहरूमा विधिले कार्बनिक सॉल्भन्ट्स (% et% इथेनॉल) प्रयोग गरेर पारम्परिक विधिहरू (भाटा, सोक्सलेट र maceration) बाट प्राप्त गरेको तुलनामा उच्च ट्रान्स-सिन्नमेल्डेहाइड र कूमारिन सामग्री प्रदान गर्दछ। प्राकृतिक गहिरो eutectic सॉल्भेन्ट्स को प्रयोग गरेर अल्ट्रासोनिक निकासीको लागि अधिकतम अवस्था कोलोन क्लोराइड-साइट्रिक एसिड (ChCl-CA) 40०% पानी थप र ट्रान्स सिन्नमालडिहाइड (.2 .२4 ± ०.०१ मिलीग्राम / g) निकाल्न to० मिनेट निकाल्ने समयको रूपमा पाए र दालचिनी बार्कबाट (११.man ± ०.११ मिलिग्राम / जी) कौमारिन (सी। बुर्मन्नी ब्ल्यूम)। थप अनुसन्धान दालचीनी बार्क देखि trans-cinnamaldehyde र coumarin को औषधीय गतिविधि अन्वेषण गर्न गरिनु पर्छ। (cf. आर्यती एट अल। २०२०)
दालचिनी बार्कको सतह छवि स्क्यान गर्दै इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी १०००x म्याग्निफिकेसन प्रयोग गरेर; सुक्खा पाउडर (ए); maceration निकासी पछि (बी); भाटा निकासी पछि (सी); Soxhlet निकासी पछि (d); NADES-UAE ChCl-CA (e) को प्रयोग गरेर निकासी पछि।
अध्ययन र आर्याति एट अल द्वारा चित्र। २०२०
The UIP2000hdT दालचिनी निष्कर्षणका लागि २kW शक्तिशाली अल्ट्रासोनिकेटर हो
उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्राकर्स
अल्ट्रासोनिक निकासी एक विश्वसनीय प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी हो, जसले उच्च गुणवत्ताको अत्यावश्यक तेलहरूको उत्पादनलाई सघाउ पुर्‍याउँछ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स पोर्टफोलियोले कम्प्याक्ट ल्याब अल्ट्रासोनिकेटरहरूबाट औद्योगिक निष्कर्षण प्रणालीसम्म पूर्ण दायरा कभर गर्दछ। यसैले, हामी हिलस्चरमा तपाइँ तपाइँको परिकल्पना गरिएको प्रक्रिया क्षमताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिकेटर प्रस्ताव गर्न सक्दछौं। हाम्रो लामो समय-अनुभवी कर्मचारीले तपाईंलाई अन्तिम उत्पादन स्तरमा तपाईंको अल्ट्रासोनिक प्रणालीको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता परीक्षण र प्रक्रिया अनुकूलनबाट सहयोग गर्दछ।
हाम्रो अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरहरूको सानो फुट-प्रिन्टको साथै स्थापना विकल्पहरूमा उनीहरूको बहुमुखी प्रतिभाले तिनीहरूलाई सानो अन्तरिक्ष प्रशोधन सुविधाहरूमा पनि फिट बनाउँदछ। अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू खाद्य, फार्मा र पोषण पूरक उत्पादन सुविधाहरूमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छन्।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उत्पाद पोर्टफोलियोले उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरको पूर्ण श्रृंखलालाई सानोदेखि ठूलासम्म कभर गर्दछ। थप सहायक उपकरणहरूले तपाईंको निष्कर्षण प्रक्रियाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक उपकरण कन्फिगरेसनको सजिलो संयोजनको लागि अनुमति दिन्छ। इष्टतम अल्ट्रासोनिक सेटअप परिकल्पना गरिएको क्षमता, भोल्यूम, कच्चा माल, ब्याच वा इनलाइन प्रक्रिया र समयरेखामा निर्भर गर्दछ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ब्याच र अविरल प्रवाह-थ्रु प्रक्रियाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक ब्याच प्रोसेसिंग प्रक्रिया परीक्षण, अनुकूलन र सानोदेखि मध्यम आकारको उत्पादन स्तरको लागि आदर्श हो। बोटानिकलहरूको उत्पादनको ठूलो खण्डका लागि (जस्तै दालचीनी पात र बार्क), इनलाइन प्रशोधन अधिक लाभदायक हुन सक्छ। जबकि ब्याच गर्न एक धेरै साधारण सेटअप आवश्यक छ, यो अधिक समय- र श्रम-सघन छ। एक निरन्तर इनलाइन निष्कर्षण प्रक्रिया परिष्कृत सेटअप आवश्यक छ – पम्प, होसेस वा पाइप र ट्याks्कमा समावेश छन् - तर यो अधिक कुशल, छिटो छ र कम श्रमको आवश्यकता छ। तपाईको निष्कर्षण भोल्युम र प्रक्रिया लक्ष्यहरूको लागि हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्ससँग सबै भन्दा उपयुक्त निकासी सेटअप छ।
सबै हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरू ठ्याक्कै नियन्त्रण योग्य छन् र यसरी उत्पादनमा भरपर्दो कार्य घोडाहरू। आयाम एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटर हो जसले दालचिनीबाट अत्यावश्यक तेलहरूको अल्ट्रासोनिक निकासीको दक्षता र प्रभावलाई प्रभाव पार्दछ।
सबै Hielscher Ultrasonics’ प्रोसेसरहरू आयाम को सटीक सेटिंग को लागी अनुमति दिन्छ। सोनोट्रोड्स र बूस्टर सी accessoriesहरू सामानहरू हुन् जसले विशाल परिमाणमा परिमाण परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। हिल्सचरको औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू धेरै उच्च आयामहरू वितरण गर्न र अनुप्रयोगहरूको माग गर्नको लागि आवश्यक अल्ट्रासोनिक गहनता प्रदान गर्न सक्छ। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै निरन्तर २ 24/7 अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ।
सटीक आयाम सेटिंग्स र स्मार्ट सफ्टवेयर मार्फत अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरूको स्थायी अनुगमनले तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावकारी अल्ट्रासोनिक सर्तहरूको साथ आफ्नो दालचीनी पातहरू र बंकको उपचार गर्ने सम्भावना दिन्छ। उत्तम निष्कर्षण परिणामहरूको लागि इष्टतम Sonication!
अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा रैखिक मापन गर्न सकिन्छ। यसको मतलव तपाईले ल्याब वा बेन्च-शीर्ष अल्ट्रासोनिकेटरको प्रयोग गरेर प्राप्त गर्नुभएको प्रत्येक परिणामको रूपमा, उही उस्तै प्रक्रिया प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर ठीक उही आउटपुटमा मापन गर्न सकिन्छ। यो जोखिम मुक्त सम्भाव्यता परीक्षण, प्रक्रिया अनुकूलन र वाणिज्यिक निर्माणमा पछिको कार्यान्वयनको लागि अल्ट्रासोनिकेसन आदर्श बनाउँछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कसरी Sonication तपाईंको दालचीनी निकासी उत्पादन बढाउन सक्दछ।
आयुर्वेदिक जडीबुटी को अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष
सिलोन दालचीनी, "साँचो दालचिनी" पनि भनिन्छ वा दालचीनीम ज़ेलेनिकम यसको गहन स्वादका लागि मूल्यवान छ, जसलाई दालचिनी-जस्तो चिन्न सकिन्छ। सिलोन दालचीनी दालचीनीम जाइलेनिकम रूखको उखुली आन्तरिक बोक्राबाट आउँदछ र यसको मीठो र नाजुक स्वाद छ। यसको रंग हल्का खैरो छ।
क्यासिया, वा दालचीनीम अरोमाटियममा कडा, अधिक शक्ति दिने स्वाद कम स्पष्ट मिठास र अधिक गहन अन्य स्वाद यौगिकहरूको साथ हुन्छ। त्यसकारण क्यासिया दालचिनी अक्सर बेक्ड सामान र रेसिपीमा प्रयोग हुन्छ, जसमा अन्य मसला पनि समावेश हुन्छ। यसको रंग गाढा, रातो खैरो छ। क्यासिया क्विलहरू बरु कठोर र वुडी हुन्। क्यासिया उत्पादन गर्न सस्तो छ र सिलोन भन्दा सस्तो बजार मूल्य छ।
साइगोन दालचिनी, वा दालचीनीम लोरेरोइ। साइगोन दालचिनी क्यासिया परिवारको सबैभन्दा बहुमूल्य सदस्य हो। योसँग कम, मिठासको साथ पूर्ण, जटिल स्वाद छ। साइगन दालचिनी सामान्यतया धेरै महँगो हुन्छ।
आवश्यक तेलहरू बोटहरूमा पाइने केन्द्रित वाष्पशील सुगन्धित यौगिकहरू हुन्, जसले बोटहरूलाई उनीहरूको अनौंठो सुगन्ध दिन्छ। फ्याटी एसिडको विपरित, आवश्यक तेलहरू अस्थिर, अत्यधिक केन्द्रित तेल हुन्छन्, जुन फूल, पात, काण्ड, जरा, बीउ, बार्क, राल वा फलफूलमा हुन्छन्। आवश्यक तेल हाइड्रोफोबिक हो, तर पशु र वनस्पति तेलको विपरित, फ्याट्टी एसिड ट्राइग्लिसराइड्स (अर्थात् स्याचुरेटेड, मोनोसैच्युरेटेड र पॉलीअनसेच्युरेट फ्याट्टी एसिडहरू) बाट बनेको हुँदैन। उदाहरणका लागि, आवश्यक तेलोंको मुख्य घटकहरू हाइड्रोफोबिक टेर्पेन्स हुन्, जुन फ्याटी तेलभन्दा भिन्न हुन्छन्, किनकि यसमा फ्याटी एसिडका ट्राइग्लिसराइडहरू हुँदैनन्।